बाइक को चेन सफा गर्ने क्रममा बुढि औला को थोरै nail सहित मासु छैन can i use #betadine मलम सर? Ani २४ गते १ महिना पुग्छ doctor ko सल्लाह अनुसार टिटानस को injection लगाउन पर्दैन भन्नू भयो, पछि कुनै side effect गर्छ कि गर्दैन !! भनिदिनु पर्यो सर please reply me
Asked by बाइक को चेन सफा गर्ने क्रममा बुढि औला को थोरै nail सहित मासु छैन can i use #betadine मलम सर? Ani २४ गते १ महिना पुग्छ doctor ko सल्लाह अनुसार टिटानस को injection लगाउन पर्दैन भन्नू भयो, पछि कुनै side effect गर्छ कि गर्दैन !! भनिदिनु पर्यो सर please reply me
47 views0Answers0Likes General Physician
Asked by Sujan lama
7 views0Answers0Likes
Asked by Suresh shrestha
बच्चाले खाना खाने बितिकै पातलो दिशा गर्छ । उमेर ६ बर्ष, तौल २७ केजी । अरु सबै ठिकै ६ तर आजबाट खाना खाने बितिकै पातलो दिशा गरेकोछ । ३/४ पटक गर्यो आज
11 views0Answers0Likes Paediatrics
conximed 90 mg Ra Ducap 30 mg khadaixu Covid vaccine lagauna milxa...